ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Evgeny Afineevsky ထုတ်လုပ်သည့် "Francesco" မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၌ ဖော်ပြ ခဲ့သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏မျက်ချက်စကားတချို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သောရက်များက အမျိုးမျိုးသော တုံ့ ပြန်မှုများ၊ ရှင်းလင်းချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမိန့်ဆိုခဲ့ သောမှတ်ချက်စကားများအပေါ် မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နိုင်စေရန် အထောက်အကူပြုမည့် ရှင်း လင်းချက်တချို့ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်အချိန်က မီဒီယာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်က အကြောင်းအရာမတူသောမေးခွန်းနှစ်ခုကို သီးခြားစီဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ယခု ဖော်ပြခဲ့သော မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၌မူ ထိုမေးခွန်းနှစ်ခုနှင့် အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကို ချန်လှပ်ထား ပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက မေးခွန်းတစ်ခုတည်းကို တစ်ဆက်တည်းဖြေကြားခဲ့သယောင် တည်းဖြတ်ထား ပါသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ကြည့်ရှုနားဆင်သူများအကြား ရှုပ်ထွေးမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။
ပထမဦးစွာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ကက်သလစ်သာသနာ၏ရပ်တည်ချက်ကို အကိုးအကားပြု၍ မိသားစုအတွင်း၌ သားဖြစ်စေ၊ သမီးဖြစ်စေ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူဖြစ်နေပါက ၎င်းတို့ကို ခွဲခြားမဆက်ဆံ သင့်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတွေဟာ မိသားစုဝင်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘုရားရဲ့သား သမီးတွေဖြစ်တာကြောင့် မိသားစုထဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဘယ်သူမှ ဖယ် ကြဉ်ခံရထားတာမျိုး၊ နာကျင်ခံစားရတာမျိုး မရှိသင့်ဘူး။”
ဗာတိကန်က ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သည့် “မိသားစုရေးရာညီလာခံ”အပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ သော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏စာချွန်တော် “Amoris Laetitia (မိသားစုအတွင်းရှိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ)”မှ ယခု ဖော်ပြမည့်စာပိုဒ်ကိုဖတ်လျှင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ဖြေကြားချက်ကို ပို၍ပင်နားလည်နိုင်ပါသည်။
“လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားသူများရှိနေသည့် မိသားစုများ၏အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ညီလာခံ ၌ ပါဝင်ခဲ့ကြသောဆရာတော်ကြီးများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အထက်ပါအခြေအနေ မျိုးမှာ မိဘများရော၊ သားသမီးများအတွက်ပါ ခက်ခဲသောအခြေအနေမျိုးဖြစ်သည်။ ရှေးဦးစွာပြောလို သည်မှာ မည်သို့သောလိင်စိတ်မျိုးရှိနေပါစေ လူသားတစ်ဦးစီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားလျက် ၎င်းတို့ ကို ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံအတည်ပြုလိုပါသည်။ “မတရား ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်အပြုအမူမှန်သမျှ”၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့အပေါ် တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက် ခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ထိုသို့သောမိသားစုများကို သာသနာတော်က သင့် လျော်သောလမ်းညွှန်မှုများပေးရပါမည်။ သို့မှသာ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏အလို တော်ကို သိရှိနားလည်ပြီး ထိုအလိုတော်အတိုင်း ဘ၀တွင် နေထိုင်ကျင့်ကြံနိုင်ရန် လိုအပ်သောအကူ အညီများရရှိနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။” (AL ၂၅၀)
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း၌ ဖြေကြားခဲ့သည့် မေးခွန်းနောက်တစ်ခုမှာ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၌ ဆယ် နှစ်ကြာအသုံးပြုနေခဲ့ပြီဖြစ်သော “လိင်တူချင်းလက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုရှိရေး” ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏မြို့တော် ဗြူနိုအိုင်းရစ်၏ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်အဖြစ် အမှုတော်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး ထိုဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ သူလည်းဖြစ်သည်။ ထိုယုံကြည်ချက်ကို အခြေခံ၍ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက “လိင်တူချင်းလက်ထပ်တယ် ဆိုတာ သဘာ၀နဲ့ဆန့်ကျင်နေပါတယ်”ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောဆိုပြီးနောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး က ထိုသူတို့အနေဖြင့် တရားဥပဒေ၏အကာအကွယ်ပေးမှုကိုမူ ရပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်မိန့်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဖို့လိုတာက သူတို့ချင်းပေါင်းဖက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံ့ဥပဒေတစ်ခုရှိရမယ်။ ဒါမှသာ သူတို့ဟာ တရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒါကိုတော့ ကျွန်ုပ်ထောက်ခံ ပါတယ်”
၂၀၁၄ ခုနှစ်က ဖြေကြားခဲ့သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင်လည်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက ထို ကဲ့သို့ပင်ဖြေကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
“လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုတာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးအကြား ပြုလုပ်ရတဲ့အရာပါ။ အတူ ပေါင်းသင်းနေထိုင်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနေတာကြောင့် နိုင်ငံတွေကတော့ လိင်တူချင်းပေါင်းဖက်တဲ့ဥပဒေ ကို ပြဋ္ဌာန်းလိုကြတယ်။ အတူပေါင်းဖက်တဲ့သူတွေအကြား ရှိလာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊ ဥပမာ ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူခွင့် အစရှိတဲ့အရေးကိစ္စတွေရဲ့တောင်းဆိုတွေမှုကလည်း တိုးလာနေတယ်။ ဒါ က ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါင်းဖက်နေထိုင်ကြသူတွေအတွက် သတ်မှတ်ရမယ့် သဘောတူညီချက်မျိုးပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခြေအနေက မျိုးစုံရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာမသိ နိုင်ပါဘူး။ မတူညီတဲ့အခြေအနေအလိုက် မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်နိုင်အောင်တော့ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။”
အထက်ပါဖြေကြားချက်များကို ကြည့်ပါက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် နိုင်ငံများ၌ လုပ်ဆောင်နေ ကြသော အထောက်အကူပြုဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်၍ မိန့်ကြားနေခြင်းသာဖြစ်ဖြစ်ပြီး ကက်သလစ် သာသနာတော်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းများကို ရည်ရွယ်မိန့်ကြားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားလေသည်။ ထိုရပ်တည်ချက်ကိုလည်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်မံ၍ အတည်ပြုမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်။
Some statements contained in the documentary “Francesco” by filmmaker Evgeny Afineevsky, have provoked, in the past few days,avariety of reactions and interpretations. Therefore, we are offering some useful points of clarification, with the hope of—per his instruction—providing an adequate comprehension of the words of the Holy Father.
“Together with the Synodal Fathers, we discussed the situation of families whose members include persons who experience same-sex attraction,asituation not easy either for parents or for children. We would like before all else to reaffirm that every person, regardless of sexual orientation, ought to be respected in his or her dignity and treated with consideration, while ‘every sign of unjust discrimination’ is to be carefully avoided, particularly any form of aggression and violence. Such families should be given respectful pastoral guidance, so that those who manifestahomosexual orientation can receive the assistance they need to understand and fully carry out God’s will in their lives” (AL 250).
A subsequent question from the interview was in reference toaten-year-old local law in Argentina on “marriage equality of same-sex couples” and his opposition to them as the then-Archbishop of Buenos Aires in this regard. To this end, Pope Francis has affirmed that “it is an incongruity to speak of homosexual marriage,” adding that­—in that in the same context—he had spoken about the rights of these people to have certain legal protection: “What we have to have isacivil union (convivencia civil) law. That way they are legally covered. I stood up for that.”
The Holy Father expressed himself this way during an interview in 2014: “Marriage is betweenaman andawoman. Secular states want to justify civil unions to regulate different situations of cohabitation, pushed by the demand to regulate economic aspects between persons, such as ensuring health care. It is about pacts of cohabitating of various natures, of which I wouldn’t know how to list the different ways. One needs to see the different cases and evaluate them in their variety”